I-Silence Beach - Enye yezindawo ezinhle kakhulu okufanele uzithole | Ukuhamba kwe-Absolut
Kunezindawo eziningi ezingasolwandle esingagqamisa kuzo uLwandle lwaseCantabrian, kepha Thula ulwandle liyohlala liphakathi kwezikhundla eziphezulu. Ukuba ngenye yezindawo ezinhle kakhulu uma uthi nhlá futhi lokho kusinikeza indawo yokuthula, noma kunini lapho sifuna ukujabulela usuku olwandle noma lokuhambahamba.
Ukuthula nendawo ikwenza kube indawo kanokusho, ethokozelwa abaningi. Itholakala ku- ugu olusentshonalanga ye-Asturias, ngakho-ke isivele inezela ebuhleni bendawo, konke okusinikwa yilo mhlaba, okungekuncane. Ngabe ufuna ukwazi okwengeziwe ngaleli pharadesi emhlabeni?
1 Ungafika kanjani ePlaya del silencio?
2 Sizotholani kulolwandle
3 Amaphuzu wokubuka nemibono yabo ebheke olwandle
4 Umkhuba wezemidlalo
5 Amathiphu okufanele uwacabangele
Ungafika kanjani ePlaya del silencio?
Le ndawo itholakala edolobheni laseCastañeras, okuyi Itholakala ngaphakathi komkhandlu waseCudillero (cishe amakhilomitha ayi-15). Ngokusho nje le ndawo, siyazi ukuthi sibhekene nendawo yokuphupha. Abaningi benu abazi iCudillero nakanjani bacabanga okufanayo. Yebo, ukuze sifike ebhishi okukhulunywa ngalo kufanele siqale sibheke idolobha laseCastañeras. Ukusuka lapho, kuzoba nezinkomba futhi kuzodingeka uthathe umgwaqo omncane kakhulu, kepha uzowufanele.
Kungekudala ngaphambi kokufika, sizothola indawo yokupaka izimoto, kepha kulokhu kuyakhokhwa. Lokhu kuzosinika umkhondo wokuthi ibhishi selivele liseduze kakhulu. Sizoqhubeka siye phambili manje umgwaqo unendlela eyodwa kuphela. Ngakho-ke singapaka ezinhlangothini zalo. Vele, uma kufana nokuthi awukwazi ukukuthola, kuzofanela uye endaweni yokupaka izimoto esishilo. Uma usupakiwe, kufanele uhambe imizuzu eyishumi. Kuyindawo ethambile kodwa inezitebhisi ezindiza ukufika olwandle. Ngisho nalokhu kuhamba kukufanele!
Uma sebukubo, ubuhle buyabonakala futhi kunzima ukubuchaza. Kepha yebo, khumbula ukuthi zizoba ezinye Amakhilomitha angama-300 olwandle ngobude, ngoba incane kakhulu ngobubanzi. Kuzoba cishe amamitha angama-30 olwandle lwase-virgin. Indawo yokuphumula nokujabulela, njengoba nasehlobo akuhlali kumatasa kakhulu. Amabhulokhi amakhulu amatshe ambhekile nxazonke ngendlela yamawa neziqhingana, amboze le ndawo futhi ayinikeze ubumfihlo obukhulu.
Kepha futhi ukuthi itshe likhona nasesihlabathini, okungaphezu kwalokho, owokuqala uzoba protagonist ukwedlula owesibili, noma ngabe kwenzeka ebhishi. Vele, emanzini futhi ikhona ngesimo sohlobo lwesikhulumi. Kepha ngenxa yalokho, i- inhlanganisela yolwandle, isivumela ukuthi sijabulele umbala wemvelo omningi, ocacile futhi ophelele. Kulezi shades phakathi kwe-turquoise ne-emerald ezenza uzizwe ebhishi le-paradisiacal, njengoba kunjalo ngempela.
Amaphuzu wokubuka nemibono yabo ebheke olwandle
Elinye lamaphuzu wokubuka asondele kakhulu kufayela le- ukupaka okukhokhelwe ngaphambi kokufika olwandle. Uzobona ukuthi umgwaqo wenza kanjani ijika futhi lapho uzothola indlela yokuthola umbono omusha wale ndawo. Izithombe ze-panoramic azikwazanga ukushiya ngemuva ebhishi lokuthula. Vele, ngemuva kancane kwale ndlela eya ekubukeni, sizohlangana nenye. Kepha kulokhu, asikho isibonakaliso esiholela kuso. Itholakala ohlangothini lwesobunxele futhi uma uyithola, uzobona nobuhle bendawo, kusuka kwenye indawo yokubuka.
Vele kukhona neminye imikhondo, enye yazo ohlangothini oluya ngasempumalanga futhi ukusuka ogwini lolwandle, oluzosiyisa emfuleni nasedwaleni elikhulu elingabonakala kuleli bhishi, ukusazisa kolunye: Ibhishi laseLa Barquera. Yize singeke sikwazi ukungena kuwo, sizothatha izithombe ezikhetheke kakhulu. Kubukeka sengathi ama-koves akule ndawo, ayenzeka ukusinikeza umbukiso omuhle kakhulu.
Endaweni enjengale, kuyiqiniso ukuthi ngeke sihlale sithola indawo enesihlabathi eminingi yokushiswa yilanga. Ngakho-ke ukwenziwa kwemidlalo ethile kuvame kakhulu. I- ukudoba ngaphansi kwamanzi noma kwezemidlalo Kuyinto ehlanganisiwe endaweni efana nePlaya del silencio. Ngakolunye uhlangothi, ngoba amanzi awo ngokuvamile ahlala ezolile, okwenza umkhuba wemisebenzi ehlukahlukene uhambisane kangcono. Ngaphandle kwalokho amanzi awo acwebe kakhulu. Uma uthanda ukutshuza lapho kuzoba yindawo enhle kuwe. Ungaqala ohlangothini lwesokunene lolwandle, ushibilika eweni elizokuyisa kwezinye iziqhingana. Lapho ungazicwilisa futhi uthole yonke impilo yasolwandle, engeyona encane, futhi egcwele ubuhle.
Amathiphu okufanele uwacabangele
Khumbula ukuthi njengoba kwenzeka kaningi ngamabhishi ngokujwayelekile, kufanele uhlukanise ne- igagasi eliphansi noma igagasi eliphezulu. Lesi sakamuva sizoba nendawo encane yesihlabathi kepha yehle, ngaphandle kokuthi inyathele kakhulu emadwaleni atholakala kuyo. Lapho umjolo uphuma, khona-ke kuzoba nesihlabathi esithe xaxa, kepha ukungena emanzini kuyalulekwa ukuthi kube nezicathulo ezithile. Uzokwazi ukujabulela ezinye izikhala ezivuleka phakathi kwamadwala futhi ezizokwakha ukwakheka okusha kwasekuqaleni. Uma ubanda noma ubanda, uzocabanga kabili ngokungena olwandle, ngoba amanzi athanda ukubanda impela.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Thula ulwandle
Yini ongayibona esifundazweni saseCádiz